Hambom-po maha Malagasy : hankalazaina eny Andohalo koa ny taom-baovao malagasy | NewsMada
Hambom-po maha Malagasy : hankalazaina eny Andohalo koa ny taom-baovao malagasy
Nanamafy ny fisian’ny hetsika ho fankalazana ny Taom-baovao malagasy eny amin’ny kianjan’Andohalo ny 9 sy 10 marsa izao, ny Trano kolotoraly malagasy sy ny fikambanana Zon’olombelona Mijoro, omaly. Raha ny fanazavana miaraka nataon’izy ireo : « fototra iray hampiroborobo ny hambompom-pirenena ao amin’ny vahoaka tsirairay ny fankalazana ny «Taom-baovao malagasy ». Ny maha firenena ny firenena, ny tany, teny, tantara, fomba amam-panao ary ny finoana. Samy hitondram-panazavana mandritra ny hetsika eny Andohalo avokoa ireo.
Alarobia 9 marsa amin’ny 3 ora tolakandro, hira vakodrazana. Amin’ny 5 ora hariva, fandrehetana sy fizarana « Afo tsy maty ». Amin’ny 6 ora hariva, harendrina arahina fanentanana ataon’ny mpanakanto amin’ny 7 ora hariva. Misasakalina, tsodrano avy amin’ny Trano kolotoraly malagasy arahina totorebika mandra-maraina.
Alakamisy 10 marsa amin’ny 5 ora maraina, tsodrano sy tatao ary zara hasina. Amin’ny 8 ora maraina, fanentanana sy fahatongavan’ireo nasaina. Amin’ny 10 ora maraina, fankalazana manetriketrika ny Taom-baovao malagasy miaraka amin’ny fitsidihana trano heva.